CHINA PHONE များကို FIRMWARE ရှာခြင်း နှင့် FIRMWARE တင်ခြင်း ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
CHINA PHONE များကို FIRMWARE ရှာခြင်း နှင့် FIRMWARE တင်ခြင်း
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး Saturday, February 20, 2016 androidfirmware No comments
China Clone တွေလို့ ခေါ်တဲ့ တရုတ် Handset တွေကို မြန်မှာနိုင်ငံကို ဈေးပေါပေါနဲ့ ရောင်းချကြတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ MOBILE Handset ဆို ဈေးပေါပေါနဲ့ ပွတ်လို့ရတယ်... ဖုန်းဆက်လို့ရတယ်... အင်တာနက်ဆိုတာလေးလဲရတယ် ဆိုတဲ့လူတွေရှိသလို ငွေကြေးကြောင့် ကိုင်တဲ့လူတွေလဲ ရှိပါတယ်။
ထားပါ .... စာရေးသူပြောချင်တဲ့ အဓိက ကအဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းဆိုတာ အသုံးပြုနေရင် ပျက်တက်တာပဲလေ။ကိုယ်ကရောင်းတော့ ရောင်းလိုက်တယ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖုန်းက logo မှာတင်ရက်နေတယ် solftware ရေးကမယ့် အနေ အထားတစ်ခု
Factory data reset ချကြည့်တယ် အဆင်မပြေဘူး။
ဒါကတော့ Solfware သေးလို့ နောက်မှလာခဲ့ပါ ဆိုရင်လဲCoustomer ရဲ့ ညိုညင်ခံရမယ် ။
အဲလိုမဖြစ်အောာင် China Phone တွေကို Solfware ပြန်ရေးတက်အောင် Online မှာ အလွယ်တကူ ရှာတက်အောင် ဒီ post လေးကို ရေးလိုက်တာပါ။
တစ်ကယ်လို့ အမှားပါတယ် ဆိုရင် စာရေးသူကို ခွှတ်လွှတ်ပေးပါ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စာရေးသူကိုယ်တိုင် လဲနည်းပညာ နယ်ပယ်မှာ လေ့လာနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ပါ။
လေ့လာမိသလောက်လေးကို နီးဆက်ရာ နယ်ပယ်လေးမှာ ပြန်လည်မျှဝေချင်တဲ့ စေတနာကြောင့်ပါ။
အခု နမူနာ ပြပေးမယ့် hanset i9100 china Phone ပါ။
ပုံမှန် Service မလုပ်တဲ့လူမျိုး ၊ နည်းပညာ နယ်ပယ်ကို အခုမှ လေ့လာတဲ့ သူတွေဆို ဒီဖုန်းက ဘယ်လို
ဘာကြောင့်လဲ့ဆိုတော့ ပုံမှန် recovery ၀င်မယ်ဆို Volume + (or) Volume - ရယ် Power ရယ် ၁၀second လောက် ဖိထားရင် recovery mode )၀င်သွားပါတယ်။ချွင်ချက် အနေနဲ့တော့ Home (အလယ်ခလုပ်)Key ပါတဲ့ ဖုန်တွေဆိုရင်တော့ Home Key ကိုပါတွဲနှိပ်ပေးရပါတယ်။
စာရေးသူ စမ်းသက်မဲ့ဖုန်းဆိုရင် ပုံမှန်ပါနေကျ Recovery မပါပါဘူး။
Factory Mode ပဲပါတက်ပါတယ်။China Clone ဖုန်းတော်တော်များများဟာ အဲ့လို Factory Mode ပဲပါတက်ပါတယ်။
အဲ့တာဆို ဘယ်လို reset မေးလာနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော် wall မှာ X-bo တစ်လုံးနဲ့ Recovery မပါတဲ့ ဖုန်းတွေကို တရုပ်လို စာတွေနဲ့ Reset ချတာကိုပြောထားပါတယ်။အခုတော့ စာရေးသူရဲ့ အစမ်းသက်ခံ ဖုန်းအကြောင်းပဲပြောရအောင်။
Factory Mode မှာဘာတွေပါလဲ လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ..
1 . Full Test
2 . Item Test
4 . Clear Flash
5 . Version
6 . Reboot ဆိုပြီးတော့ ပါပါတယ်။
စာရေးသူ က အကျဉ်းချုံးပြောရမှာမို့ 1,2,3 တို့ကိုမပြောတော့ပါဘူး
အဲ့တော့4ကနေ စပြောလိုက်ရအောင် ....
4 . Clear Flash ဆိုတာ ဘာနဲ့လုပ်ဆောင်ပုံ တူလဲဆိုတော့ Factory Data rest နဲ့ အတူတူပါပဲ။
သူကလဲပြောမယ်ဆိုရင် Memory ic (or) EMMC ဆိုတဲ့ IC ထဲကနေ USER Dataတွေကို ဖျက်ပေးတာပါပဲ။
အဲံတာကြောင့် factory ဆိုတာမပါရင်လဲ တစ်ခြားတစ်ခုခု ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။
5. မှာရှိတဲ့ version ဆိုတာကတော့ factory reset လဲချကြည့်တယ် မရဘူး
ဆိုရင်တော့ firmware ရေးရမယ့် အနေအထားရောက်လာပါပြီ။အဲ့တာဆိုရင်တော့ နံပါတ်5ဖြစ်တဲ့ version ဆိုတာ လိုလာပါပြီ။version ဆိုတဲ့ အထဲကို power ခလုပ်နှိပ်လိုက်ရင် ၀င်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဘာတွေပါလဲဆိုရင် Phone ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ CPU , imei , Model version,barcode , Uboot Version
Kernel Version ,Android version ,SW Version,Custom Version တွေပါလာပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ထဲမှာ ဓိက လိုတာကတော့ SW Version ပါ။အဲ့တာက ဘာလဲဆိုတော့ စာရေးသူတို့ ရှာရမယ့်Firmware ပါ။
မခက်ပါဘူး။Coumputer ကိုအခြေခံ သိရုံနဲ့ ရှာလို့ရပါတယ်။
1 Broswer တစ်ခုခု ကိုဖွင့်ပါ။
2 www.google.com ကိုရိုက်ပါ ။ Google Box ကျလာရင်ခုဏက ပြောတဲ့ SW Version ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
3 Web page တွေထဲကမှ အစင်ပြေတာ တစ်ခုကိုရှာပါ။
4 ပြီးရင် ဒေါင်းပါ။ရလာတဲ့ File ကိုဖြည်ပါ။ပြီးရင်သက်ဆိုင်ရာ tools နဲ့ Firmware ရေးရင် အဆင်ပြေတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးပြန်ရသွားပါပြီ။
စာရေးသူ နမူနာ ပြပေးတဲ့ Phone ကတော့ MTK ကိုအသုံးပြုထားတာကြောင့် SP Flash Tool နဲ့ ရေးရမှာပါ။
SP Flash Tool ရေးနည်း။
စာရေးသူတို့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ အတွက်ရယ်။
လူများစု ကအခြေခံလူတန်းစားတွေများတာကြောင့် အာရှကျားတွေထဲက တစ်ကောင်ရဲ့
၀ါးမြိုခြင်းကို ခံနေရပါတယ်။တရုပ်ပြည် အနောက်ပိုင်း တောင်တန်းဒေသတွေမှာ အခြေခံလူတန်းစားတွေဟာ...
သူ့တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကို အစမ်းသက်ခံဖို့ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို တရားမ၀င် ရောက်ရှိလာတဲ့ ဖုန်းတွေ တစ်နည်းအားဖြင့် China Clone တွေလို့ ခေါ်တဲ့ တရုပ် Handset တွေကို မြန်မှာနိုင်ငံကို ဈေးပေါပေါနဲ့ ရောင်းချကြတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ MOBILE Handset ဆို ဈေးပေါပေါနဲ့လက်ပွတ်လို့ရတယ် ဖုန်းဆက်လို့ရတယ် အင်တာနက်ဆိုတာလေးလဲတယ် ဆိုတယ် လူတွေရှိသလို ငွေကြေးကြောင့် ကိုင်တဲ့လူတွေလဲ ရှိပါတယ်။
ထားပါ စာရေးသူပြောချင်တဲ့ အဓိက ကအဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်
ဖုန်းဆိုတာ အသုံးပြုနေရင် ပျက်တက်တာပဲလေ။ကိုယ်ကရောင်းတော့ ရောင်းလိုက်တယ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖုန်းက logo မှာတင်ရက်နေတယ် solftware ရေးကမယ့် အနေ အထားတစ်ခု
ဒါကတော့ Solfware သေးလို့ နောက်မှလာခဲ့ပါ ဆိုရင်လဲ
Coustomer ရဲ့ ညိုညင်ခံရမယ် ။ပလာဇာ ဆိုလားဘာဆိုလား ဆရာတွေရှိတဲ့ နေရာမှာကြတော့လဲ 8000,10000 ပေးရမယ်။ဒါတောင် ဆိုင်သမား အချင်းချင်းမို့နော်။နယ်သမားတွေဆို ပိုလို့တောင် ဆိုးသေးတယ် မရရင်ပြန်ကိုပေးပစ်တာ။အဲလိုမဖြစ်အောာင် China Phone တွေကို Solfware ပြန်ရေးတက်အောင် Online မှာ အလွယ်တကူ ရှာတက်အောင် ဒီ post လေးကို ရေးလိုက်တာပါ။
Factory Mode မှာဘာတွေပါလဲ လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ...
အဲတာကြောင့် factory ဆိုတာမပါရင်လဲ တစ်ခြားတစ်ခုခု ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဆိုရင်တော့ firmware ရေးရမယ့် အနေအထားရောက်လာပါပြီ ။
အဲ့တာဆိုရင်တော့ နံပါတ်5ဖြစ်တဲ့ version ဆိုတာ လိုလာပါပြီ။version ဆိုတဲ့ အထဲကို power ခလုပ်နှိပ်လိုက်ရင် ၀င်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ထဲမှာတော့
SP Flash Tool ရေးနည်း
Download ဆွဲလို့ ရလာတဲ့ အထဲက Flash Tool.exe ကို အောက်မှာ ပြထားတဲ့ ပုံ ထဲက အတိုင်း Run ပါ။
အောက်က ပုံလေးထဲကအတိုင်း scatter.txt ကို ထည့်ရပါမယ်။
အောက်က ပုံလေးထဲကအတိုင်းပဲ CWM Recovery img လေးကို ထည့်ပေးရပါမယ်။
Download ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။
ဒီအဆင့်ပြီးသွားရင်တော့ မိမိဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပါ။ ဘက်ထရီ ခနဖြုတ်ပြီး ပြန်တပ်။ ကွန်ပျူတာမှာ USB ထိုးလိုက်ပါ။ အလိုအလျှောက်တင်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
မူရင်း => သုတမီဒီယာ